Tag: ọrụ otu egwuregwu | Martech Zone
Tag: ahịa otu ọrụ
The nkezi ahịa mmekọrịta management (CRM) ngwọta bụ a mara mma static n'elu ikpo okwu… a nchekwa data nke njikọ, omume ha, na; ikekwe, ụfọdụ njikọta na sistemụ ndị ọzọ na-enye nghọta ọzọ ma ọ bụ ohere ịre ahịa. N'otu oge, njikọ ọ bụla dị na nchekwa data gị nwere njikọ siri ike, na-emetụta ndị ahịa ndị ọzọ na ndị na-eme mkpebi azụmaahịa. Mgbatị a nke netwọkụ gị emeghebeghị, agbanyeghị. Gịnị bụ mmekọrịta ọgụgụ isi? Mmekọrịta ọgụgụ isi teknụzụ nyochaa data nkwukọrịta nke otu gị ma mepụta eserese mmekọrịta achọrọ na-akpaghị aka
Spiro na-eji ọgụgụ isi eme ihe iji nye ndị ahịa gị ndị isi nghọta na ndị na - ere ahịa gị ga - akwado aro maka usoro kachasị mma iji nyere aka gbochie ohere furu efu ma mekwaa ahịa ahịa. Ndị ahịa Spiro na-akọ ụfọdụ nsonazụ dị ịtụnanya, gụnyere: Ikike ịnakọta 16 ugboro karịa data Ikike gị ma ọ bụ ndị ahịa gị ga-eru na 30% atụmanya ọzọ n'otu oge. Ikike imechi 20% ahịa ndị ọzọ Uru nke Spiro Gụnyere Spiro